Kambani - Shenzhen XJCSENSOR Technology Co, Ltd.
Kubva 2009, XJCSENSOR inotungamira Yekudzora sisitimu sisitimu mhinduro uye mupi wechigadzirwa muindasitiri
Semunhu anotungamira wekupa simba rekudzora sisitimu mhinduro, XJCSENSOR inosimbirira pane "vatengi-vanotarisana, mhando-yakavakirwa, yakazvimiririra hunyanzvi" seyedu bhizinesi tenet, uye inogara ichitevedzera "Kutendiswa kubva kuhunyanzvi" seyedu manejimendi manejimendi. XJCSENSOR inopa nyanzvi OEM sensors kune vatengi kuti vawedzere kugutsikana kwavo.
Shenzhen XJCSENSOR Technology Co, Ltd. (XJCSENSOR) yakavambwa muna2009 ine 4000 m2 nzvimbo.
XJCSENSOR inotungamirwa neSZ. CN, uye ine mahofisi muSuzhou, Hong Kong & Germany.
XJCSENSOR ibhizimusi repamusoro-soro renyika rine patent dzinopfuura makumi mana uye zvigadzirwa zve software.
Tine timu yeR & D ine vanhu vanopfuura gumi vane makore mazhinji ekugadzira nekuvandudza ruzivo mu sensor maindasitiri.
XJCSENSOR yawana zvitupa zvepasi rese zveEC & Rohs zvinodiwa, uye zvakanyatso shandisa ISO9001 & ESD manejimendi sisitimu, uye yakaverengerwa semutengesi wemhando yepamusoro.
XJCSENSOR inotarisa pane mashoma maseru maseru, maseru anorema, akawanda-axis & torque, sensors, akangwara, sensors uye akangwara kudzora zviridzwa, izvo zvinoshandiswa mumagetsi michina musangano, chaiyo yekurapa, simba nyowani, robhoti, semiconductors, kwesainzi research, yakakwiraer dzidzo, nezvimwe.
XJCSENSOR mahofisi achapararira pasi rese. XJCSENSOR timu ichave ichiona basa ravo, isu tichavaka zvikoro munzvimbo dzine hurombo uye nekutsigira basa revadzidzi.
XJCSENSOR inoshandisa tekinoroji-inonyungudika tekinoroji, kuisa mari mukugadzirwa kwema semiconductors & piezoelectric sensors, uku ichigadzira chikamu cheindasitiri nekudyara R&D yekumanikidza kudzora software system.
XJCSENSOR ichaisa mari kutsvagurudza kwesainzi uye kwehungwaru hupfumi manejimendi yekuve mutungamiri mu sensor maindasitiri, kuwedzera invests muR & D yepamusoro-yekupedzisira sensor kutsigira CNC michina yekugadzirisa nzvimbo.
XJCSENSOR inowedzera kugadzirwa uye inosimbisa kugona kweR & D; kushandisa ISO9001, ESD manejimendi system; vakawana SGS-CE & maRohs zvinodiwa; Kuzvidzivirira kwakazvimiririra, torque, akawanda-akabatana masimba maseru, ayo anoshanda mune zvekurapa, Nyowani Nyowani, robhoti, semiconductor minda, nezvimwe; Isu tinotsigira nzvimbo dzine hurombo uye tinounganidza vashandi kuti vabatane nevanozvipira.
XJCSENSOR yakadyara R & D uye kugadzirwa mune smart sensors & metres. Isu takayera seye mhando yepamusoro yekutengesa. XJCSENSOR yakadaidzwa kumusangano weBOC nemuzinda weApple kuUS na2016.
XJCSENSOR inyanzvi mune mashoma maseru maseru, zvinokudziridza, zviratidzo, nezvimwe izvo zvinoshandiswa mumashandisi emagetsi emagetsi, senge foni screen & kuona bhatani, zvishandiso zvemagetsi zvitsva, nezvimwe. Isu takakwanisa semutengesi wepamusoro weApple neHUAWEI;
Shenzhen XJCSENSOR Technology Co, Ltd. (XJCSENSOR) yakavambwa, inoshandisa masimba maseru, zvinokudziridza, nezvimwewo, zvinonyanya kushandiswa mumaindasitiri emagetsi michina, minda nyowani indasitiri yesimba, nezvimwe.